Kharkov - magaalada ugu caansan ee Ukraine ka mid ah ardayda ajinebiga ah
Kharkiv (Yukreeniyaan), ama Kharkov (Ruush), sidoo kale waa magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine (ka dib Kyiv, Dabcan). 3/4 qarnigii ka hor waxaa laga badiyay ay xaaladda magaalada caasimadda ah ee Ukraine (Soviet Ukraine), laakiin waa caasimada waxbarasho ee Ukraine.
Tirada dadka ee Kharkov waa 1.5 malaayiin dad. Kharkiv ayaa richcultural a, sayniska, waxbarashada, gaadiidka iyo nolosha warshadaha. City ayaa marti boqolaal shirkadaha warshadaha. Xitaa intii lagu jiray xiisadda magaalada waxaa soo koraya. hotels New la dhisay.
nidaamka gaadiidka ee Kharkov waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee Ukraine. Intii lagu guda jiray diyaarinta Euro 2012, Dowladda magaalada cusboonaysiiyey waddooyin badan iyo qaar ka mid ah marshrutka jidadka bartamaha bedelay si ay u sameeyaan gaadiidka ka yar culus. Kharkiv metro waa 35 km dheer oo uu leeyahay 28 saldhigyada. Waxaa tareenada cusub soomi laucnhed in ay ku xidhmaan magaalooyinka waaweyn ee Ukraine (Kyiv, Donetsk, Lviv).
Kharkov Airport ayaa la dayactirey iyo xidhiidh cusub la kasta bilaabay sanadkii badh.
The durkin ugu caansan ee Kharkiv waa Freedom Square (Ploshcha Svobody), square saddexaad ee ugu weyn magaalada ee Europe, iyo waxa ay qaadataa meesha 7aad marka uu ka hadlayo ku saabsan adduunka. About jiidashada kale ee Kharkiv aad halkan ka akhriyi kartaa.